Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Rhian Brewster Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL
Anyị Rhian Brewster Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Net Worth, Web and Life Life.
Na nkenke, ọ bụ akụkọ zuru oke nke Rhian Brewster's Life Story, site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Lee nchịkọta nkenke nke Bio ya.
Ee, ikekwe ị maara ya dịka otu oge Liverpool ebube. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị hụrụ egwuregwu bọọlụ n'anya kwenyere na ọ bụ onye agbadoro ebum n'uche okike. N'agbanyeghị otuto ndị a, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara banyere Rhian Brewster's Bio, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. N'egbughị oge, ka anyị bido.
Rhian Brewster Childhood Akụkọ:
Maka ihe na-ebido ihe ndị na-eme eme na ndụ ya, aha ya bụ “Doc Brew”. Ọ bụ Rhian Joel Brewster a mụrụ na 1st ụbọchị nke Eprel 2000 na nne ya, Hulya Hassan na nna, Ian Brewster na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ nke Chadwell Heath na Dagenham, England.
Nwa okorobịa Rhian Brewster tolitere na nwanne nwanyị Jaylece. Ọ dị naanị afọ abụọ mgbe ọ malitere ịkụ bọl mgbe ọ lere papa ya anya ka ọ bụrụ onye na-eche nche. Ọ gwara SportsJoe ozugbo:
“Papa m gwara m na oge m kacha nwee obi ụtọ dị ka nwatakịrị bụ mgbe ọ bụla m nwere bọl, ebe mama m na-echeta na ịgba m bọlbụ bụ nrọ n’ihi na agaghị m ahapụ ya.
Anọ m na-ele papa m ka ya na ndị enyi ya na-egwu egwu kemgbe m mụtara ije ije. N'ileghachi anya azụ, ekwenyere m na enwere m mmasị maka egwuregwu ahụ. "
Nke a bụ nwata Rhian Brewster Steven Gerrard mgbe ị lechara egwuregwu n'etiti Liverpool na West Ham na Upton Park.
Ezigbo Ezinụlọ Rhian Brewster:
Onye ọ bụla nke na-ege ntị n’ihu na-akọ akụkọ ndụ ya ma ọ bụ gụọ akụkọ ndụ ya ga-ekwenye na ya nwere oge nwata. N'ezie, ndị nne na nna Rhian Brewster bụ ụmụ amaala na-enweghị nsogbu na-enye ya na nwanne ya nwanyị ihe kachasị mma nke nwata.
N'ihi amụrụ gị na England, onye maara ihe n'egwuregwu bọọlụ nwere ike iji obi ike kwupụta ịbụ onye mba Britain. Agbanyeghị, nsonaazụ nke nyocha anyị mere iji chọpụta agbụrụ ezinụlọ ya na-egosi na ọ nwekwara ike ịpụta dịka Barbadian, Turkish ma ọ bụ Cypriot. Eeh, i kwutere ya; ọ bụ agbụrụ ya na-ahụ n'anya!
Rhian Brewster Football Akụkọ:
Onye na-anụ ọkụ bọl mgbe ahụ bụ obere afọ 6 mgbe ọ malitere igwu egwuregwu asọmpi maka Shield Academy YFC. Ka ọ na-erule oge Brewster bụ agadi 7, ụdị ọrụ ya na ụdị ya masịrị ndị na-egwu egwuregwu si Chelsea, Arsenal, West Ham United na Charlton Athletic. Ọ sonyeere Chelsea wee si otú a malite njem ya na Career Football.
Lys Mousset Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Na-agaghị Eke Ndụ
Afọ Ndị Mbụ na Nlekọta Ọrụ:
Enweghị ịgọnahụ eziokwu ahụ na Chelsea dị mkpa maka mmepe n'ihu, n'agbanyeghị na ọ nọrọ naanị afọ 7 na klọb ahụ. Ọ bụ na blues ka Brewster mepụtara egwuregwu ya n'okpuru onye nchịkwa Michael Beale tupu ya ahapụ Liverpool. Nke a bụ foto a na - adịghị ahụkebe nke Doc Brew na - eme emume mgbaru ọsọ mbụ o nyere Liverpool. Dị ka Todd Cantwell, o nwere obi ụtọ n’oge ọ bụ nwata.
Rhian Brewster Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mkpebi nke 14 afọ ahụ ịhapụ Chelsea maka Liverpool na-ama aka mgbe ọ chọpụtara na nnukwu aha ọ maara na agụmakwụkwọ ka ga-abanye na ndị otu egwuregwu mbụ nke Chelsea ma ọ bụ nkwalite nchebe. Ọ gwara SportsJoe na:
“Egburu m oge dị ukwuu na-agba mbọ iji chọpụta ihe mere ụfọdụ ndị na-eto eto na-enweghị atụ na agụmakwụkwọ ji enwe nsogbu. Emechara m chọpụta na enweghị ohere dị, ọbụlagodi maka ụmụ nwoke anyị chere na pacenti 100 ga-aga ”.
Rhian Brewster Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Mgbe ọ nọ na Liverpool, Brewster bilitere n'ọkwá ma mee ka ndị otu egwuregwu izizi ya na 2016 n'oge nke ọ meriri okpu megide Accrington Stanley. E gosipụtara ya na egwuregwu ndị ntorobịa ma kpọọ ya na bench maka nnukwu egwuregwu egwuregwu mbụ, gụnyere 2019 UEFA Champions League Final megide Tottenham Hotspur.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Brewster chịkọtara nrite onye mmeri dịka Liverpool meriri 2-0 n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ dịtụbeghị mbụ na otu egwuregwu ma ọ bụ asọmpi ya na ndị otu egwuregwu. Anyị kwuru na ọ nara nrite ebe ọ bụla ọ gara?
Ọsọ dị n'ihu n'oge edere isiokwu a na Rhian Brewster Biography Eziokwu, ọganihu na-aga ahịa ya maka Sheffield United. Ọbịbịa ya na klọb na-esote nnukwu ego mgbazinye ego na Swansea City na nnukwu nnabata na Liverpool. Kedu ụzọ ọ bụla ihe si kwụrụ maka ya na klọb ọhụrụ ya, ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Onye bụ Rhian Brewster Dating?
Yinghụnanya Doc Brew na-ahụ n'anya maka ịgba bọl na-eme ka ọtụtụ ndị chee ma ọ nwere mmetụta ịhụnanya ọzọ maka ịhapụ nwanyị. Nke a na - ewetara anyị ajụjụ na - adịghị agwụ agwụ banyere Nwanyị Rhian Brewster. O nwere nke o nwere n'ezie, ka o na-acho oge ya?
Na lifebogger, anyị maara na ọhụụ na-alụbeghị di ma ọ bụ enweghị nwa nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị n'alụghị di. Otu anyị si achọpụta ya, ọdịnaya gbasara enyi nwanyị Rhian Brewster ga-emesịa mebie cyberspace mgbe ọ bụla ọ họọrọ ịlụ nwanyị ọ bụla.
Ndụ Rhian Brewster Ezinụlọ:
Kedu ndị ndị Doc Brew ji kpọrọ ihe na gịnị ka ha mere iji nwee ọnọdụ pụrụ iche n'obi ya? Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Rhian Brewster, ụmụnne ya na ndị ikwu ya.
Banyere nna Rhian Brewster:
Ian bụ nna nke maara ihe gbasara bọl. Mba Barbadian na-egwu bọọlụ ọkara-pro dịka onye na-eche nche n'oge ndụ Brewster ma mesịa bụrụ onye njikwa bọọlụ. Brewster kwadoro Ian maka nkwado na-enweghị ọdịmma onwe ya ọ gosipụtara na mkpebi ọ bụla nke ịga n'ihu mere.
Ọzọkwa, onye na-aga n'ihu na-echeta na papa ya na-adị njikere mgbe niile inye ndụmọdụ na ịkwanye ya ka ọ ka mma. Nke a bụ Rhian Brewster na Nnukwu Nna Ya, Ian bụ onye chọrọ ka nwa ya nwoke, dị ka Kalvin Philips, ga-enweta oku England site na klọb EPL na-abụghị nnukwu-isii.
Banyere Rhian Brewster nne:
Hulya bụ nne na-aga n'ihu. Onye Turkish Turkish Cypriot abanyela ntutu ebe ọ bụ na Brewster nwere ike icheta. Nne nke ụmụ abụọ hụrụ nwa ya n'anya nke ukwuu ma na-arụ ọrụ ịchụ àjà na mmepe ya. Brewster kwupụtara ya maka ịkụziri ya na ọ bụ ezie na ọ na-arụsi ọrụ ike, o kwesịrị ịmụta ịghọta ihe ndị ọ na-amataghị na ha kwesịrị ịme.
Banyere ụmụnne Rhian Brewster:
Anyị enweghị ike ichefu ikwu banyere naanị nwanne nwanyị na-aga n'ihu, bụ Jaylece. Ọ bụ naanị nwanne ya nwoke na onye ịrụ ụka adịghị ya na ọ kachasị akwado ya. Ọbụna ọ nọ mgbe Brewster nyeere England aka imeri U17 World Cup ọkara-ikpeazụ egwuregwu megide Spain, asọmpi nke na-aga n'ihu na-apụta dị ka onye mgbaru ọsọ kachasị elu.
Banyere ndị ikwu Rhian Brewster:
Ewezuga ezinụlọ nke onye ahụ na-aga n'ihu, enweghị ndekọ banyere nna nna ya, ọkachasị dịka o metụtara nne na nna ya na nne na nna ya. N'otu aka ahụ, o nwere ndị nne na nna, nwanne nne ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya ndị amabeghị onye ọ bụ.
Ndụ Onwe Gị:
Ọnye na-bụ Rhian Brewster?…. Nke mbu, enwere okwu ole na ole kacha kọwaa onye ịga n'ihu bụ bọl. Iji malite, Brewster bụ onye na-ala azụ nke hụrụ ọchị ọchị ma nwee ike ịbụ nwata. Ọ dịkwa mpako ma na-ekwusi okwu ike. Kedu ihe ọzọ, ọ bụghị naanị na ọ na-ekwu okwu ma bụrụ eziokwu kama ọ na-eme ka magnetik dị anya.
Onye ọ bụla nke na-ege ya ntị ikwu okwu ga-esiri ya ike ịchọpụta ma onye na-eti ihe bụ 20 afọ ma ọ bụ nwoke 70 nke jupụtara na amamihe. Mgbe ọ bụla Brewster na-anọghị na olulu ahụ, ị ​​nwere ike ijide ya ka ọ na-ekpori ndụ na egwuregwu vidio, na-eme njem ma soro ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrọ ezigbo oge. Nwa anyi nwoke aghaghi ibu onye njem.
Ndụ Rhian Brewster:
Banyere otu onye na - eti ihe si eme ma na - emefu ego ya, ọnụ ahịa ya na 2020 ka a na-eme atụmatụ na $ 1 nde. Anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ na ụgwọ ọnwa na ụgwọ ọrụ bụ ihe ka ukwuu nke akụ na ụba ya mgbe Adidas na-akwado ya na-eme ka obi sie ya ike na ọ ga-enweta ọdịnihu ego.
Agbanyeghi na emeghi ka ndi mmadu mara ihe banyere nkwekorita nkwekorita nke Brewster na Sheffield, ihe ndi o nwetara na klọb bu olile anya nke ugwo 177,000 kwa afo nke o ritere na Liverpool. Ya mere, ọ ga - abụ naanị oge tupu nwatakịrị ahụ amalite ịgba ụgbọ ala mara mma na ụlọ dị oke ọnụ iji kwekọọ n'ọnọdụ ya dị ka kpakpando Premier League dị oke ọnụ.
Eziokwu banyere Rhian Brewster:
Iji mechie ederede a, lee ihe omuma ma obu ihe omuma banyere Striker.
Eziokwu # 1 - Nkwụnye ụgwọ ọnwa na ego site na nkeji
EGO NA-EGO EGO (£)
Kwa Afọ £ 833,280
kwa ọnwa £ 69,440
Kwa Izu £ 16,000
Kwa .bọchị £ 2,286
Kwa elekere £ 95
Kwa Izu £ 1.6
Sekọnd £ 0.02
Nke a bụ ihe Rhian Brewster akwụla ụgwọ kemgbe ị malitere ilele Bio ya.
Eziokwu # 2 - Rhian Brewster FIFA Profaịlụ:
Ọga n’ihu nwere ọkwa ihere dị ala nke 70. Ọ ga-enwerịrị iru mkpesa banyere ọnụọgụ ndị anaghị egosipụta eziokwu. Dị ka anyị na-atụ anya maka Ollie Watkins, anyị nwekwara nchekwube na Brewster ga-ebili ngwa ngwa na FIFA stats.
Emre nwere ike ịbụ nwata Akụkọ Plus abụghị eziokwu
Eziokwu # 3 - Okpukpe Rhian Brewster:
Brewster na-eti anyị ihe dị ka Onye Kraịst, n'agbanyeghị na o kwughị okwu ma ọ bụ imegharị ahụ iji gosi nke ahụ. You nwere echiche dịgasị iche? Nabata ịgwa anyị na ngalaba nkọwa.
Eziokwu # 4 - Nkwado mba nile:
You maara na Brewster tozuru oke ịpụta maka mba 4? Ee, onye egwu egwu ahụ emeela anya ole na ole maka ndị ntorobịa England. Agbanyeghị, ọ kabeghị nkwa ịkwado ya. Yabụ, ọ nwere ike gosipụta Turkey, Cyprus ma ọ bụ Barbados ma ọ bụrụ na ọ chọrọ.
Eziokwu # 5 - Rhian Brewster's Tattoos:
Onye na-eto eto nwere ihe maka igbu egbugbu. Ileba anya na aka ekpe ya na-egosi na o nwere akuko. Ahụ nka nwere okwu ndị gụrụ "asị gị na-eme ka m ghara igbochi m". Okwu ndị ahụ na-egosi na onye na-eti ihe ahụ họọrọ ịghara ịda mbà site na mkparị agbụrụ ya na-ata ahụhụ mgbe mgbe. Lelee egbugbu Rhian Brewster.
Rhian Brewster Biography nchịkọta:
Ọ bụ Rhian Joel Brewster
Aha Nick Doc biya
Ụbọchị ọmụmụ Daybọchị mbu nke Eprel 1
Ebe amụrụ onye Chadwell Heath na England.
Egwuregwu Onye na-egbu ya
Ndị nne na nna Hulya (nne) na nna ya, Ian (nna)
Nwanne Jaylece (nwanne)
enyi nwanyị N / A
omume ntụrụndụ Na-ekpori ndụ na egwuregwu vidio, njem na iso ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrọ ezigbo oge.
Net bara uru $ 1
ụgwọ 177 Pound Kwa Annum
elu 5 ụkwụ, 11 sentimita asatọ
Daalụ maka ịgụ ihe ndekọ a zuru ezu na akụkọ ndụ Rhian Brewster. Anyị nwere olile anya na o meela ka i kwenye na mkpebi ndị emere taa na-ekpebi usoro ihe ga-eme n’ọdịnihu. Brewster mere mkpebi amamihe dị na ya iji sonyere Liverpool mgbe ọ chọpụtara na ọganiihu na Chelsea enweghị isi.
N'ikwu nke a, mkpebi ya ịhapụ Liverpool ebe ọ na-enweghị ohere megide asọmpi Mo Salah, Mane na Firmino e chere echiche nke ọma. Anyị ga-asọpụrụ nne na nna Rhian Brewster maka ịkwado ya na mkpebi ọ bụla o mere ma na-achọ ya ịga nke ọma.
Na lifebogger, anyị na-eme izi ezi na ịzi ezi oge anyị na-ebugharị akụkọ nwata na akụkọ ndụ. Hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Enock Mwepu Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Akwụkwọ akụkọ Sheffield United
Che Adams Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Chris Wilder Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere na Ya
John Lundstram Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu